Dimuquraadiga Maraykanka oo la wareegay Aqlabiyada Golaha Shacabka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dimuquraadiga Maraykanka oo la wareegay Aqlabiyada Golaha Shacabka
Dimuquraadiga Maraykanka oo la wareegay Aqlabiyada Golaha Shacabka
November 7, 2018 - By: Khalid Yusuf
Xisbiga Dimuquraadiga Maraykanka ayaa la wareegay Aqlabiyada Golaha Shacabka Maraykanka (House of Representatives), halka xisbi Trump uu weli heysto Aqlabiyada Aqalka Sare ee Senate-ka.
Codbixintii shalay ka dhacday dalka Maraykanka ayaa ahayd loolankii ugu adkaa ee golayaasha dalkaasi tan iyo markuu xilka qabtay Donald Trump oo si weyn u kala qeybiyey shacabka Maraykanka.
Golaha Shacabka oo ka kooban 435 kursi ayaa waxaa hada hogaamin doona xisbiga mucaaridka ah ee Dimuquraadiga oo illaa iyo hada ku guuleystay ugu yaraan 218 kursi iyadoo la filayo in xisbigaasi uu helo kuraas dheeraad ah gobalada ay weli ka socoto tirinta cododka.
Waxaa xildhibaanada cusub ee golahaasi u badan haween dhalinyaro ah oo ay kamid tahay Xildhibaanada Ilhan Cumar oo laga soo doortay gobalka Minnesota oo noqon doonta qofkii ugu horeeyey oo Soomaali ah oo xilkaasi qabta.
Xisbi Xaakimka Jamhuuriga ee Donald Trump ayaa iyagu ku guuleystay inay sii haystaan kuraasta ugu badan ee Aqalka Sare ee Senate-ka oo ka kooban 100 kursi iyagoo hada heysta ugu yaraan 51, waxaa weli socda tirinta cododka 5 kursi, waxaase la filayaa in taageerayaasha Trump ay golahaasi sii hogaamiyaan taasi oo guul u ah Donald Trump oo ka cabsi qabay in hadii Dimuquraadiga la wareego labada Aqal ay xilka ka xayuubiyaan. Golaha Senate-ka ayaa horey loo filayey in Jamhuuriga sii heysan doono maadaama kuraasta sanadkan lagu loolamayey ay u badan yihiin Senatorada laga soo doorto gobalada ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Madaxweynaha Trump.
Hase yeeshee Donald Trump ayaa hada wajahaya Golaha Shacabka oo ay la wareegeen dimuquraadiga, kuwaasi oo joojin kara dhamaan sharuucda iyo mashaariicda uu qorsheenayey inuu hirgeliyo Trump. Waxaana taasi usii dheer in Golahaasi uu dar-dar gelin karo baaritaanada lagu waday Donald Trump sida xiriirka uu la leeyahay Ruushka, eedeynta ah inuu lunsaday canshuur badan iwm.